1SAMOELA 2.1-11	F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1SAMOELA 2.1-11	F. 2
Fanehoana hafaliana. Nipololoitra teo amin’ny molotr’i Hana ny fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny fahaterahan’i Samoela. Maneho ny hafaliana amin’ny namonjen’Andriamanitra azy Hana ka feno fiderana Azy. Ity hira fiderana hita eto ity dia hira fanao amin’ny andro fety lehibe voarakitra ao amin’ny Salamo 18 na Salamo 113 izay manambara ny maha masimandidy an’Andriamanitra sy tompomarika Azy amin’ny zavatra rehetra.
Fahatsaran’Andriamanitra. Mpitsara izao tontolo izao Izy, Izy no mahafaty sy mahavelona, mampahantra sy mampanan-karena ka manome hery ny mpanjaka apetrany sy manandratra ny fahefan’ny voafidiny ! Lehibe Ianao Andriamanitra ô !
Mibanjina an’i Kristy. Tsy nitarazoka tamin’izay mafy nampiharin’i Penina taminy Hana na nieritreritra ny hamaly faty fa nitodika nibanjina an’Andriamanitra sy ny fahalehibiazany. Tsy amin’ny hery tokoa no handresen’ny olona eo amin’ny fiainany. Lehibe tokoa mantsy izay ao anatintsika noho izao tontolo izao (1Jaona 4.4) Maivana tokoa ireny manoloana ny zava-dehibe sy mahagaga ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika ! Hita taratra eto koa ny finoan’i Hana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Tarihin’ny Fanahy Masina Hana ka manambara ny zavatra hitranga rahatrizay (10).
Fanentanana : Andeha hidera ny Tompo fa Lehibe ny fitiavany sy famindrampony amintsika !